Izixhobo Fishing, yamaphandle Rod Ukwenziwa Machine, iin- Test Machine - Tonglian
Ngaba iqela lemveliso yobuchule, kunye neemveliso ezintsha, Obusemagqabini ubunjani kraca ingqiqo nkonzo abatsha.
Nomgangatho wemveliso ezithembekileyo igama inkonzo onyanisekileyo, waba yinkokheli eyona yobungcali.
Ukufakwa: siya kuthumela amagcisa ukuba asikhulule on-site ufakelo kunye nezixhobo yohlelo kunye nabasebenzi noqeqesho.
Weihai izixhobo zokuloba Tonglian mveliso, sikweyona kwisixeko esihle unxweme - kwiphondo Shandong Weihai City Village Industrial Zone, iingcali kwimveliso yokuloba, izixhobo yegalufa yokuvelisa, kunye ukwandiswa ngempumelelo yophuhliso enkulu ubukhulu yeglasi tube, ezinye carbon kushishino tube volume izixhobo yokubumba entsimini.
kwikona Automatic umatshini ukusika
enobubanzi Large machine coring
Gantry ibhola machine kumbhobho iqhosha lemenyu